Kedu akpụkpọ ụkwụ ịgba ịnyịnya ígwè kacha mma n'oge oyi? - Cygba Ígwè
Isi > Cygba Ígwè > Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ oyi n'okporo ụzọ - ihe ngwọta dị irè
Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ oyi n'okporo ụzọ - ihe ngwọta dị irè
Kedu akpụkpọ ụkwụ ịgba ịnyịnya ígwè kacha mma n'oge oyi?
Akpụkpọ ụkwụ ịgba ịnyịnya kacha mmamakaoyi
Northwave Arctic R GTXAkpụkpọ ụkwụ ịgba agba oyi. Zụta ugbu a site na Chain Reaction Cycles maka $ 182.00.
Nkà Mmụta Ahụike R5 ArticaAkpụkpọ ụkwụ ịgba agba oyi. Zụta ugbu a site na eBay maka $ 111.99.
Sidi Zero Gore 2Akpụkpọ ụkwụ ịgba agba oyi.
Ọdọ CX 145Akpụkpọ ụkwụ ịgba agba oyi.
Bontrager JFWAkpụkpọ ụkwụ ịgba agba oyi.
Otu n'ime ihe ndị na-adọrọ adọrọ banyere igwe kwụ otu ebe bụ na ịnwere ike ịnya ha ebe ọ bụla na n'ọnọdụ niile, n'agbanyeghị na oge ụfọdụ akụrụngwa ị na-eyi nwere ike ịnweta ọ thatụ ahụ. - Eeh, uwe na-enweghị mmiri, akwa mmiri, ihe ndị ahụ niile, onye ọ bụla ma ihe niile gbasara n'èzí, mana a na-echefu ụkwụ gị mgbe niile. Ya mere, gịnị ka ị ga - eme iji mee ka ụkwụ gị na - ekpo ọkụ ma kpọrọ nkụ n'ụgbọ mmiri oyi a, mmiri oyi? (Egwuregwu Egwuregwu Piano) - Ugbu a enwere ụzọ abụọ dị mkpa mgbe oyi na mmiri, ma ọ bụ soro akpụkpọ ụkwụ gị na-ejide onwe gị oge niile nke ga-eme ka ị dị mpako n'oge ọkọchị ma ị maara na ị ga-enwe ụkwụ oyi na mmiri, n'agbanyeghị na ị nwere ike itinye ụfọdụ Marina Sọks Smart Wool na ma ọ bụ ụfọdụ sọks na-enweghị mmiri nke na-agwakọta na oge oyi, pụọ ebe ahụ ma nweta ụfọdụ akpụkpọ ụkwụ na-agba ịnyịnya n'oge oyi.
Ọ nwere ike ime nnukwu ọdịiche. Iji chọpụta, anyị kpọrọ Fi'zi: k na m nyere iwu otu akpụkpọ ụkwụ oyi na akpụkpọ ụkwụ das ir trail na-aga n'ihu ma anyị ga-eji ha na isi n'isi ụzọ ụkwụ na ọkachasị na unyi. (Egwú) - Dị ka ịhọrọ igwe kwụ otu ebe maka ụdị ịnya gị, akụrụngwa kwesịrị ekwesị ga-emetụta arụmọrụ gị na igwe kwụ otu ebe ma ọ bụrụ na ọ gbasara gị, mana ihe kachasị ndị mmadụ mkpa bụ nkasi obi.
Yabụ ọtụtụ n'ụgbọ ịnyịnya m bụ ihe na-erughị awa abụọ ogologo ma na-agba ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ nke enduro, ezigbo ije n'elu ugwu ahụ, obere ezumike, wee banye. Ya mere, m na-ahọrọ ngwa iwu ndị na-adịchaghị mfe mana na-echekwa, debe m kpoo ọkụ, kamakwa na-agagharị, ma ọ naghị ekpo ọkụ. - N'adịghị ka Neil, onye chọrọ ka ọ gaa ọsọ ọsọ ma mee ọtụtụ ọsọ na-agba ọsọ dị ka o kwere mee na nkenke, ịnya ụgbọ ịnyịnya iwe, Achọrọ m ịme nke ọzọ na Winder n'ihi na, n'ụzọ zuru oke, na enwere m ike ịnọnyere ya, mana enwere m ọzọ Oge na-agba ịnyịnya ígwè m n'oge oyi m na-ekwu banyere igwe kwụ otu ebe ụbọchị niile, ị ga-apụrịrị maka ihe niile ahụ n'ihi na ị ga-ewe iwe.
Na ịpụ n’oge oyi, ị kwesịrị ịnya ịnya ụgbọ ịnyịnya kwesịrị ekwesị ka ọ bụrụ ọnwa anọ n’afọ ka m nwere ike iyi ihe eji agba ịnyịnya nke m ga-eji oge ahụ n’afọ n’ihi na ọ ga-eme ka m na-aga oge anọ, ma ọ bụ opekata mpe oge ise. Kpamkpam ego. Yabụ kit m na-eji bụ akwa mmiri na-enweghị mmiri, na-eku ume zuru oke, anyị na-egosi ndị ọzọ yana, nke ka mkpa, m na-eji akpụkpọ ụkwụ mkpuchi zuru ezu.
See hụrụ, nke a bụ Terra Artica, obere dị iche na nke Neil ugbu a. Ọ bụ ezie na ha nwere otu isi naanị. Ya mere, ha dịkwa oke mma na ịnyịnya ígwè ahụ.
Mana ihe dị mma banyere ha bụ na ha enweghị mmiri na mkpuchi, nke bụ ihe dị mkpa iji mee ka ụkwụ gị nwee ntụsara ahụ na njem nnukwu ugwu. (Egwuregwu guitar guitar) - Kedu maka akpụkpọ ụkwụ? Ọfọn, m na-achọ ịga trail style exped akpụkpọ ụkwụ dị ka ndị a Terra Artica X2 si Fi'zi: k. Ha dị mfe, dị ntụsara ma nwee ụdị aghụghọ.
Ugbu a ị na-anụ ọtụtụ ihe gbasara mpaghara kit ị nwere ike iyi na ogige ma ọ bụ gbanyụọ igwe kwụ otu ebe. Adịghị m atụmatụ na ma na-amasị m ịke ma ọ bụrụ na ị ga-esi ihe m na-ekwu, ya mere, ọ bụrụ na a skating style akpụkpọ ụkwụ n'ezie suut m style nke ịnya, a dị mfe lace mma ma ọ dịghị frills, na a inogide rip rip elu nke na-abụghị nnukwu. Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ maka nnyefe ike kachasị, nke ahụ anaghị ewute m.
Akpụkpọ ụkwụ dị mma maka ịnya ịnyịnya na njem njem oge ụfọdụ nke na-adịrị m mma nke ukwuu. (Music) - Ana m eji usoro ịpụ apụ mgbe m na-agba n'oge oyi ma kwadebe ya ma pụọ ​​tupu aka m na ụkwụ m nwee ohere ịjụ oyi - na-emegide Neil, ụdị mbuso agha ezubere maka ịnya, M n'ezie ụdị na-aga na eruba. Oge ụfọdụ achọrọ m ime ụdị ịgba ịnyịnya nke Neil, oge ụfọdụ achọrọ m ịnọpụ obere oge.
Ọ bụ ya mere o ji dị m mkpa inwe ihe ga-enye m ọkụ nke ga-eme ka obi ruo m ala ụbọchị niile. M hụrụ n'anya oyi na-agba ịnyịnya akpụkpọ ụkwụ. M hụrụ n'anya ngwá ọrụ kwesịrị ekwesị maka ọrụ ahụ, ihe dị ka nke ahụ, na site n'oge ị gbalịrị ihe dị ka buut oyi ị na-eche n'eziokwu na ụkwụ dị oyi bụ naanị akụkụ dị nsọpụrụ nke igwe kwụ otu ebe, nke ahụ bụ nzuzu. - thekwụ na-aga mgbe niile, ugbu a ọ na-ama mmiri.
Echere m na m na-agagharị agagharị ga-aka mma karịa na UK n'oge oyi. Feetkwụ m kpọrọ nkụ site na puddle mana n'oge ụfọdụ ha na-asacha ụgbọ mmiri.- Amaghị m ihe esemokwu banyere mgbe ị yi uwe maka emume ahụ. ị dịla njikere. (ọchị) Ya mere, akpụkpọ ụkwụ abụọ a na-elekwasị anya n'okporo ụzọ nwere ụdị mmezi ihe niile, yabụ na ha abụghị akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ na-agafe agafe, mana ha bụ ngwa ọrụ a kapịrị ọnụ, ọ bụghị ya? - Echere m, dị ka ị na-ekwu, ị gaghị enweta ike dị ka akpụkpọ ụkwụ XC, mana mgbe ahụ akpụkpọ ụkwụ XC, ị gaghị eyi ha ụbọchị niile ma nwee ahụ iru ala na igwe kwụ otu ebe, nke ahụ bụ maka ha n'ezie n'ebe ahụ.- Ha anaghị enwe nkwesi ike.
Yabụ nnukwu ihe dị iche n'ezie, ma ọ bụ otu n'ime ha, bụ mkpuchi nkwonkwo ụkwụ. - Gee, Achọrọ m nchebe ma ana m esote anyị mgbe niile m na-agbago akpụkpọ ụkwụ m, enwebeghị m ịnyịnya buut buut n'ihi na ọ bụ mgbe ọ bụla n'ime m, a ka nwere obere ọgba ọsọ n'ime ya. Ndị a dị mfe.
ndanda + heart rate nyochaa
Ha dị gram 329. - Mara mma nke ọma.- Agbanyeghị, ma eleghị anya, ha ga -atụrụ ntakịrị ugbu a na apịtị na mmiri juputara na ha.
Ma ee, akpụkpọ ụkwụ bụ ihe dị arọ - ee, nke ahụ bụ ihe dịka gram 500, mana ọ nweghị nsogbu. Ọ dịghị mkpa. Wear na-eyi akwa, ị nwere ọtụtụ akụrụngwa, igwe kwụ otu ebe na-ebuwanye ibu n'oge oyi, ndị a dabara adaba ma chefuo ịpụ na ebili mmiri. (Egwu) - Akpụkpọ ụkwụ nke akpụkpọ ụkwụ anyị bụcha otu, roba na-ama jijiji, yabụ ha kwesiri ịbụ otu na njem - a-bike.
Mana ahụla m ahụmịhe akpụkpọ ụkwụ skate hụrụ n'oge oyi mgbe ịmalitere ije na mmiri, ebe na-amị amị. Ọfọn, na akpụkpọ ụkwụ, nke ahụ ga-enyere aka. - Ọfọn, ikekwe, m na-eche a obere ihe nkwonkwo ụkwụ sta Ime ihe n'eziokwu, ọ suut m.- Ezie na m na-adịghị eme ọtụtụ hiking site igwe kwụ otu ebe, ọ bụghị a nnukwu echiche maka m.
Imirikiti ihe m na-eme n'oge na-adịbeghị anya na-agagharị na ugwu ndị a na 35 ogo okpomọkụ n'ihi ya ejighị m n'aka na m ga-achọ buut maka nke a - Agaghị m ama. N'ụbọchị ndị dị ka ndị a, enwere m ike ịchọ ịkwọ ụgbọala ma ndị a zuru oke maka nke ahụ. (Music) Ya mere enwere m mmasị n'ụsọ akpụkpọ ụkwụ ọtụtụ, ọbụlagodi ụzọ m na-agba ịnyịnya ígwè nwere ụfọdụ n'ime akpụkpọ ụkwụ hipster ahụ ma amaara m na ndị mmadụ na-ajụ m ma m ga-enwe ike ịmachi ha - ee - na enwere m ike dị ka nke gị You nwere ike nweta akpụkpọ ụkwụ mara mma ma nchekwa ma egbula ha.
Akpụkpọ ụkwụ ndị a dị ala, ya mere, ọ bụghị ihe nchebe dị ka elu dị elu, mana m emewo ka ngalaba mkpịsị ụkwụ gbasiri ike, nke a na-ahụkarị akpụkpọ ụkwụ. - Ee, ọ na-atọ ụtọ ihe ị na-ekwu gbasara eriri ahụ n'ihi na ahụrụ m akpụkpọ ụkwụ oyi n'oge gara aga akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ ma nwee mkpịsị ụkwụ n'elu mkpịsị ụkwụ - ee, ọ dị mma - ị nweghị ike ịhazigharị ha mgbe ị na-anya ụgbọala n'ihi na ị nọ na mkpuchi ed ke apịtị na ya. Mara mma ihu ọma nwere a boa na ya.
N'ihi na onye ga-eche na Boa ga-adabara akpụkpọ ụkwụ oyi, ma ọ bụ n'ezie zuru oke ma dịkwa mfe iji dozie ya na uwe aka. Na-edobekwa.- Kpomkwem.- Ya mere, lee ma ọ bụrụ na ị masịrị ha kwa.- Ee. (Egwú) - Ihe dị mkpa banyere ụdị akpụkpọ ụkwụ a bụ na ị nwere ike iyi ya n'afọ niile.
Have nwere akpụkpọ ụkwụ na-ekpo ọkụ na n'okpuru ọnọdụ dịka taa na Great Britain n'oge oyi ọ dị elu karịa ebe oyi, ọ dị oyi.- Ee.- You na-ajụ oyi ma nwee mmiri, enwere m ụkwụ ụkwụ.- Ee, jide n'aka.- Ma ị nwere ike iji ha mee ihe n'afọ niile - ee, yabụ ha akọwapụtara nke ọma.
Ọ bụ ezie na ha na-efu nnukwu ego, ọ kachasị ha mma ịnọdụ n'ọnọdụ ndị a. N'ezie, ọ dịghị ihe dị mma.- M na-ekwu, emeela m ọtụtụ.
Agara m gburugburu Coldwoods mgbe m na-emega ahụ ọtụtụ.- Ee.- Agbalịrị m ihe niile, sọks abụọ na sọks, achọpụtara m mgbe ị na-agba ọsọ ị maara, otu Summer set shoeswe Kpọọ ya n'afọ niile, ịkwesịrị iji nweta onwe gị ezi sọks nke sọks ajị anụ merino.- Ee.- Ikwesiri ịkpachara anya igbasa, ma ọ bụghị na ị ga-enwe ụkwụ oyi.
Ma sọks merino nwere ike ịme ụkwụ gị mmiri ma nwee olile anya na ha ga-ekpo ọkụ - Ee, ọ bụghị ihe ọjọọ, ọ bụ? Ọ bụ nkwekọrịta, ọ bụghị ya? - Eeh. (Egwu) - Amaghị m maka gị, mana m na-ekpo ọkụ ma ana m akpọ nkụ na naanị ihe m ga-eme bụ iwepụ uwe na-enweghị mmiri ma m nwere ike ịpụ ebe a - Kwụsị ruo ụlọ abalị - Kpomkwem , ee - Ah, m na-agbagharị n'ụzọ ụfọdụ, mana oyi atụghị m. Ugbu a, m na-eme ịnyịnya ibu m na ụkwụ aka nri m bụ mmiri mmiri, ma oyi erubeghị, mana ha nwere ike ịjụ oyi n'oge na-adịghị anya. - Ekwesịrị m ime nkwupụta. - Ee, gaa n'ihu.- Ah, na mbido isiokwu m kwuru na m na-eje ije na Fi'zi: k, nke ọma, m kwuru na anyị na-eje ije na Fi'zi: k na ụfọdụ ezigbo akpụkpọ ụkwụ.- Biko gaa na ekwentị m.- Enwere m akpụkpọ ụkwụ, enwere n'ezie ụzọ nke atọ nke m na-agwaghị gị banyere ya ma ha nwere ụdị ebe dị n'etiti wee bụrụ isi m masịrị ndị nwere boa ma ha na-egbochi mmiri mana ha bụ ọ bụghị winterproof - ịnwekwara akpụkpọ ụkwụ na-enweghị mmiri.- Ee.- Hm, ugbu a ị na-ekwu.- M na-ekwu, m na-ere akụrụngwa oge oyi, mana enwere ike ịnwe otu nhọrọ maka gị. - are bụ nke m.
Enwere m ike ịchọ sọks ọhụrụ. Echefula ka ị kụrụ mgbịrịgba ọnụ ụzọ ma banye ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnweta apịtị, nye anyị mkpịsị aka elu - bido mgbe emechara.
Bụ akpụkpọ ụkwụ ịgba ígwè n'oge oyi kwesịrị ya?
Akpụkpọ ụkwụ oyidị ike siri ike ma na-agbanwe agbanwe, na n'eziokwu, isi ojiiakpụkpọ ụkwụapụla ejiji. Ọ bụrụ na mkpịsị ụkwụ ụkwụ na-abụkarị nsogbu nye gị, ọ dị mmakwesịrịitinye ego n'ihi na ha ga-ahụ gị site n'ọtụtụ oge. Mgbe oge oyi na-ada n'ezie, ọ bụ nsọtụ ka na-ata ahụhụ nke ukwuu.Mar 19 2021
Daalụ maka ịme ntuli aka, nke a bụ The SweetCyclists, taa anyị ga-enyocha akpụkpọ ụkwụ ịgba agba agba FLR Defender. Lee, anyị nwere onye nchekwa FLR na nkwakọ ngwaahịa mbụ ya. Achọrọ m ikele FLR maka ịme akpụkpọ ụkwụ a maka nyocha.
Nke a bụ akpụkpọ ụkwụ oyi ma emee ya iji mee ka ị na-ekpo ọkụ ọbụlagodi na ihu igwe oyi. Dịka ị pụrụ ịhụ site na nkwakọ ngwaahịa ahụ, ọ dị ntakịrị si na mbupu ma ọ nwere igbe akpụkpọ ụkwụ nwere akara ngosi FLR n'elu. Ogo anyị ga-enyocha taa bụ nha $ 44 maka ebumnuche akpụkpọ ụkwụ ndị a bụ inye gị akpụkpọ ụkwụ ịgba ịnyịnya na-enweghị mmiri na mkpuchi nke ga - eme ka ị dị ọkụ n'oge oyi.
Ọ bụrụ n’itinyela mkpịsị ụkwụ ma ọ bụ mkpuchi akpụkpọ ụkwụ, ị ga-achọpụta na ha anaghị adịkarị mma na ihu igwe oyi. Ọ bụrụ na anyị gafee site na ụdịdị dị ka m na-ewepụta ya na igbe. Ga - ahụ na ndị a dị oke ọnụ, na-efu $ 139, ma emelitere maka 2019.
Ha dị dị ka nsụgharị ịgba ọsọ ịnyịnya ígwè na-arụ ọrụ na oghere atọ na otu ụdị nke na-atọ ụtọ nke ukwuu. Dịka, akpụkpọ ụkwụ ịgba ígwè n'oge oyi na-ejedebe mgbe niile na ndị na-agba ugwu ugwu. Ọ bụ ma mmiri na-enweghị mmiri na multilayered, n'ime nwere nke adịgboroja aji ụkwụ na n'èzí gbara ya gburugburu na ajị anụ mkpuchi na sịntetik akpụkpọ anụ.
Mgbe anyị meghere ya maka nke a, ị nwere sistemụ mkpuchi mmechi nke nylon iji mee ka ya sie ike wee debe Velcro na mpụga. Banyere nkwakọ ngwaahịa, ọ mara mma. A ga-enye gị ụfọdụ kaadị ozi na akpụkpọ ụkwụ ga-agwa gị ntakịrị ihe gbasara FLR na akpụkpọ ụkwụ Defender.
Ọ na-egosipụtakwa ụdị ejiji ha ma na mgbakwunye ị ga-enweta EyeMemory Eyelet nke bụ oghere nke anọ n'etiti. M ga-ejikọta otu isiokwu banyere otu esi eji ya, ihe na-adọrọ mmasị bụ na ị ga-enweta kposara ma ọ bụghị ndị na-ehichapụ ha. Also nwetakwara akara maka Thinsulate 3m nke dị egwu Amaghị m ihe kpatara na anaghị ejikọ akpụkpọ ụkwụ ahụ.
Ugbu a, ka anyị lelee ịdị arọ nke akpụkpọ ụkwụ Defender, ebe ha bụ akpụkpọ ụkwụ oyi, ha ga-adị arọ karịa ụdị akpụkpọ ụkwụ ịgba ịnyịnya ígwè gị. Akpụkpọ ụkwụ aka ekpe dị gram 364 na akpụkpọ ụkwụ aka nri ebe a bụ gram 370, ya mere ọ dị ntakịrị. Ọnụ nke ahụ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ gram 800.
Ka anyị leba anya na ihe kwesịrị ekwesị na ọrụ ọrụ nke akpụkpọ ụkwụ ịgba ịnyịnya ígwè FLR Defender. Ha bụ ụzọ dị ezigbo ọnụ iji nọrọ na-ekpo ọkụ ma kpoo ihu igwe. N'èzí anyị nwere akwa akpụkpọ anụ sịntetik nke na-eche n'ezie na-adịgide adịgide ma sie ike.
Ha nwere imepụta multi-panel nwere mpaghara ikiri ụkwụ ahụ na akara FLR na azụ na ihe ndị na-atụgharị uche n'akụkụ nke bụ nnukwu mmetụ. Ọ na-agbanwe agbanwe, ị nwere ike ịhụ na ọ na-agbanwe kama ị ga-esi ike. Ọ dị ntakịrị karịa akpụkpọ ụkwụ gị, m ka ga-akpọ ya ka ọ bụrụ akpụkpọ ụkwụ SIDI, o nwere akwa ụkwụ dị warara.
Otú ọ dị, n'ihi nhazi ọtụtụ-oyi akwa, obosara ya dum buru ibu, achọtawo m ihe a na mgbochi m ka m wee kpachara anya ebe ị na-etinye cleat. Have nwere ọmarịcha mmiri na-enweghị mmiri, nke a Velcro fastener, emelitere maka 2019, yana ihe ndị ọzọ na-egosipụta na azụ. Nke a bụ neoprene cuff ebe a, ị nwere ike ịhazigharị nke a site na obere Velcro dị iche iche iji jide n'aka na ọ dabara nke ọma.
Ọ bụrụ na ị na-agba ịnyịnya na mmiri ozuzo, ana m akwado ezigbo ọkpa mmiri na-erughị n'okpuru akpụkpọ ụkwụ ma ọ bụ sọks mmiri - akpụkpọ ụkwụ ahụ enweghị mmiri. Rịba ama na oghere ikuku ahụ adịghị ka ọ mepere emepe ebe a, nke ga-adị oke egwu maka ihe mgbochi mmiri. Ọ bụrụ na anyị mepee elu Velcro dị n'elu, ị nwere ike ịhụ faux fur ebe a, ọ na-adị ezigbo mma ma dịkwa mma ma dịkwa n'ụkwụ, nke na-eme ka ọ dị mma iyi.
Nweta sistemụ mgbakwunye nylon a nke na-adịchaghị mma dịka sistemụ ọkpụkpọ, achọtara m ya ntakịrị. Ọ na-echetara m karịa akpụkpọ ụkwụ snowboard ebe anyị nwere akwa dị n'ime nke ị nwere ike ịhazi. N'ihe banyere esemokwu zuru oke, achọpụtara m na enweghị m ike ịkwado ya, ọ dị m ka m ka na-agagharị ntakịrị, mana ọ bụghị na ọ dị mfe iji ma ị tinye ya n'ime.
Ozo i nwere ukwu aji ya ma nwekwaa oku nke otutu otutu onu oriri, mgbe inoro ya na onodu ogo 40, achoputara m ya nke oma inwe ezigbo ukuu di ukuu ma kwekwa na ukwu gi. Dị ka onye nwere ụkwụ sara mbara karị, agbanyeghị na nke a nwere ụdị nke warara nke SIDI, achọtara m ya nke ọma site na iwere ọkara ọkara ka ibu N'ebe a ị nwere ike ịhụ eserese nke ijikọ na ịrịgo mpaghara nke m yi n'ụbọchị nke dị ntakịrị ọkụ karịa ka ị ga-achọ iyi. Nke a bụ ụbọchị n'okpuru 40, mana achọpụtara m na ọ na-eku ume nke ukwuu na anaghị m asacha ọsụsọ n'oge oge m na-arị elu dị elu ma na-agbadata ngwa ngwa na ikuku ifufe ahụrụ m ụkwụ m dị mma ma na-ekpo ọkụ ma dịkwa mma , n'agbanyeghị na ire m dị na ha, ahụrụ m ndị na-agbachitere na-emechi eriri ahụ obere ntakịrị ma mara mma.
Otu ihe kwesiri iburu n'uche bụ na akpụkpọ ụkwụ dịtụ ntakịrị karịa n'ihi mkpuchi oyi akwa. Achọpụtara m n'ezie na m ga-eme ka ọ dị ntakịrị iji zere ịpị aka na ogwe aka na Defender na FLR F-11 Pro, obere akpụkpọ ụkwụ ịgba ọsọ $ 100 dị ala. Akpụkpọ ụkwụ ndị a nwere otu naịlọn R250 otu, ndị a adịchaghị oke dị ka otu carbon mana ha na-enye ezigbo nnyefe ma ị ga - ahụ ihe kpatara njiri mara ya na ụdị ihe a.
Agbanyeghị, ha gbakwunyere ụfọdụ ihe mkpuchi na mgbochi mmiri na onye na-agbachitere ya iji mee ka ọ dịkwuo mfe maka ịgba ịnyịnya oge oyi. All nke oghere na perforations ị na-ahụ na F-11 na-arahụ na kama na ị nwere na ọmarịcha faux akpụkpọ anụ mputa. Nwetakwara ahụ iru ala, ọ dị mma ma na-agbanwe ọzọ, ọ dị ka akpụkpọ ụkwụ ejiri kpuchie gị ma na-emegharị gị kama ịnwe usoro imepụta ọtụtụ.
ezigbo nri ahụike
N'ihe kwesịrị ekwesị, achọpụtara m na ihe ndị a yikarịrị, ha dị warara, dị ka akpụkpọ ụkwụ SIDI, yana dịka onye nwere ụkwụ sara mbara naanị m mere ka ha buru ibu karịa ma chọpụta na ọ dị ezigbo mma. Ha nwere udi vault na imewe yiri ya, mana ya na onye na agbachitere ha gbakwunyere ufodu nke onu oriri, nke na eme ya akpụkpọ ụkwụ buru ibu ma buru ibu. Nke a dị gburugburu gram 280 ebe nke a fọrọ nke nta ka ọ bụrụ gram 400, mana n'ozuzu ha na-eji usoro yiri nke ahụ.
Ọ bụ ụdị aghụghọ dị aghụghọ, ị nweghị ọtụtụ eserese ebe niile yana opekata mpe na Onye na-agbachitere enwere ọtụtụ ihe na-atụgharị uche. Ugbu a, ka anyị nye ndị na-agbachitere FLR ọkwa ikpeazụ na usoro imewe, m ga-enye ya A-. Thedị akwa akwa na-enye gị mkpuchi na ikpo ọkụ ịchọrọ, yana nchekwa ihu igwe maka ụbọchị mmiri ozuzo ndị ahụ.
M ga-enye mmechi ahụ B +, abụghị m onye na-akwado usoro lacing na mmechi Velcro dị ntakịrị, ọ bụ ezie na emegoro ha mma maka 2019 ị hapụrụ ya. N'ihe banyere nkasi obi, enyere m ya A - ọ dị mma nke ukwuu, enweghị mmerụ ma ọ bụ ihu dị n'ime ya na ụkwụ ahụ nwere aji, mana n'ihi mmechi ahụ, ọ bụghị nke ahụ siri ike ka m wee ghara inye ya A n'ozuzu. Na okwu nke uru, maa-enye nke a A, na $ 139 ọ bụ ezigbo ike iti.
Nwere ike itinye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na Justshoe Covers iji nweta ihe na-adịghị mmiri na nke a gwara gị. Daalụ maka ile nyocha ahụ. Ọ bụrụ na nyocha a masịrị gị, ịnwere ike ịdenye aha na ọwa.
Can nwere ike soro anyị na Instagram na @thesweetcyclists yana weebụsaịtị anyị na thesweetcyclists.com maka ọdịnaya agbakwunyere. Nke a bụ The Sweet Cyclists iji chetara gị ịnụ ụtọ njem ahụ!
Nwere ike ịnya ịnyịnya n'okporo ụzọ n'oge oyi?
Maka ndị na-achọghị ịhapụ oge ọkọchị, ma chọọ ịga n'ihun'okporo ụzọ, kaoyi igwe kwụ otu ebebụ nnukwu nhọrọ ịnọ n'èzí, na-aga otuna-agba ịnyịnya, ma mebie monotony nke ịnọ naanị na ala na onye na-enye ọzụzụ.8 nke. Dec 2019
Chọrọ ịma ka esi agafe igwe n’oge ọgba tum tum? N’isiokwu a anyị na-egosi gị ụfọdụ ndụmọdụ dị mkpa banyere otu ị ga - esi jiri obi gị niile kwadebe onwe gị na igwe kwụ otu ebe gị maka oge oyi. Mmiri ozuzo ma ọ bụ ọbụna snow. Tupu imee nke ahụ, pịa akara ngosi mgbịrịgba ka oge ọ bụla anyị bulite otu isiokwu ị ga-enweta ọkwa Ọkwa, kedu ihe na-esote? - Bike prep mbụ. (Moans) (egwu na-ada ụda) Ihe mbụ ị na-eche maka ị chọrọ bụ ịbụ nke a ga-ahụ n'okporo ámá.
Ka ụbọchị na-eru mkpụmkpụ, ehihie na abalị adịkwa, naanị ịhụ anya nwere ike ịzọpụta ndụ gị. Ọ bụrụ na i nwebeghị, tinye ego na ọkụ dị mma. Ke ofụri ofụri, M na-eji a ọkụ na igwe kwụ otu ebe m ụbọchị ndị a, ma karịsịa n'oge oyi.
N'ụbọchị, m ga-eji ya na-enwu gbaa iji mee ka ọhụhụ m nwere na ndị na-abịa n'okporo ụzọ na ndị ọrụ okporo ụzọ ndị ọzọ, mana mgbe ụgbọ ịnyịnya ahụ gbara ọchịchịrị, m ga-atụgharị ya na ntọala edoziri ka m wee hụ ebe m na-aga . Na azụ m ga-anọgide na-enwu ọkụ abụọ, otu siri ike na otu na-enwu. Ihe ọzọ ị ga-echebara ma a bịa n’itinye ọkụ gị bụ akụkụ gị iru.
Chọghị ka ọ dị elu nke ga-eme ka ihu igwe nwuo ma kpuo ndị ọrụ ndị ọzọ ụzọ, mana ị chọghị ka ọ nọrọ n’ihu sitering gị. Ebumnuche, ịchọrọ ịdị ihe dịka mita ise ruo 10 n'ihu gị, dabere na ọsọ gị, ka ị nwee ike iwepụ adịghị ike ndị a niile n'okporo ụzọ ma mee ka nchekwa gị dịkwuo elu. (Obi ụtọ na-atọ ụtọ) - N'ụbọchị mmiri oyi ma dị oke egwu, otu mudguards bụ ihe mgbapụta zuru oke.
Ọ bụghị naanị na ọ ga - egbochi gị ịnweta mmiri gị, mana ọ ga - echekwa ngwa gị ma gbochie gị ịme ọtụtụ mmezi igwe kwụ otu ebe. Ugbu a, ọ bụrụ na ị hụla ndị ọkachamara nwere oge na klọb, ị ga-ahụ otu obere obere flaps na ala nwere mudguards. Nke ahụ abụghị naanị maka ha, kamakwa maka ndị na-agba ha n'azụ ha mgbe ha nọ na-agba ịnyịnya ha.
Ọ ga-egbochi ha ịgbasa na iru unyi. Yabụ kama ịga otu ịnyịnya na ịhapụ ndị enyi mgbe ahụ ị nwere ike imeri ha. Ezigbo mbanye anataghị ikike nkeji ise.
Were a nwere ike, mkpa, na ụfọdụ duct teepu. Ma n'ebe ahụ ị nwere ya. Obi dị m ezigbo ụtọ na nke ahụ, enwere m ike iziga ya na Hack and Bodge. (Inggbọ mmiri) - Nnyocha dị oke mkpa mgbe ị na-ahazi igwe kwụ otu ebe maka oge oyi bụ nhọrọ taya gị.
Enwere ihe ole na ole ị nwere ike ime ebe ahụ. You nwere ike ịbawanye obosara ma ị nwekwara ike ịhọrọ taya na-adịgide adịgide nke kwesịrị inyere aka ịnagide ọnọdụ ị na-ahụkarị n'oge oyi. Omenala ụzọ adịghị dịka ọnọdụ dị mma n'oge oyi ma a na-asachakarị unyi n'okporo ámá.
Igwe ike na-adịwanye ike nke na-egosi ihe mgbapụ ọzọ, ya na ihe dịka Kevlar n'ime ya, ga-enyere aka igbochi ntụpọ. Tụlee taya na-enweghị tube dị ka nke anyị nwere ebe a, iji mechie ihe niile mana ọ kacha njọ mgbe ị na-apụ n'oge oyi. Ma mgbe ahụ ị nwere ike iburu n'uche obosara taya gị.
Ugbu a, n’oge ọkọchị, ana m anya taya taya nde iri abụọ na ise ugbu a. A obere ihe ohere, N'ezie kemgbe mmalite nke diski breeki oge, nke mere na anyị agaghịkwa nwere efego a rim brek n'elu taya. N'ihi ya, m nwere ike mfe efego a 28 mm ebe a.
Mgbe ahụ enwere m ike ịnya ya na-agba ọsọ na obere nrụgide maka ijide obere, mana enwekwasi nkasi obi. (Joy music) Achọrọ m ịgba ịnyịnya ígwè n'oge ọkọchị, ọkachasị n'ihi na anaghị m ehicha ya mgbe ọ bụla m na-agba ịnyịnya, mana ọ bụ naanị eziokwu na mgbe anyị na-eru nso n'oge oyi, ihu igwe adịchaghị mma na okporo ụzọ bụ obere dirtier, nke pụtara na nhicha m igwe kwụ otu ebe ga-abụ akụkụ nke ihe m na-eme, igwe kwụ otu ebe ahụ ka ruru unyi. Ehichabeghị ya n'ụzọ chi n'abalị na agbụ ahụ agbanwewo oroma.
Ihe m kwadoro bụ ịtọlite ​​obere ọdụ nhicha ebe ọ bụla ịchọrọ ịkwụsị njem gị. Yabụ ị nwere ike ịsachapụ ọsọ ọsọ kacha njọ na ngwụcha nke njem ahụ, mgbe unyi na apịtị ka dị ọhụrụ ọ na-ada karịa mfe. Ma griiz ma stows pụọ.
Nke a abụghị naanị na-egbochi igwe kwụ otu ebe gị ịgwụ ngwa ngwa, ọ na-emekwa ọtụtụ ihe na-atọ ụtọ ịnya ịnyịnya. James, gịnị mere na ị naghị eme nke ahụ n'abalị ụnyaahụ? - Yabụ, igwe kwụ otu ebe gị bụ oge oyi niile. Ugbu a ị na-eche maka uwe na ihe ị ga-eyi na okpomoku a.
Ihe niile gbasara akwa, akwa na akwa. Malite na akwa oyi akwa enwere ọtụtụ ebe site na mkpụmkpụ aka, ogologo aka, kpara, ajị anụ, mana ọ dị ezigbo mkpa ịchọta nke kachasị mma na ọnọdụ okpomọkụ ị ga-ebugharị. Mgbe ahụ, ọ na-agbadata n'ikpere ọkụ dị ole na ole.
Nke a na-eme ka okpomoku bata ma gbochie oyi. Otu okwu ị ga-echeta bụ na ị nwere ike iwepụ ọkwa mgbe ọ bụla ị dị oke ọkụ, mana ị nweghị ike itinye ya mgbe ị na-emezighị ya. Ma mgbe ahụ, e nwere akwa n'ime akpa azụ.
Nke ahụ na-eme ka ị na-ekpo ọkụ mgbe ị na-apụ, ọ na-emekwa ka ị kpoo. (Joy Music) Ọfụma, otu echiche ikpeazụ bụ na oke ọkụ na-efu n'isi gị, aka gị na ụkwụ gị. Yabụ na ọ bara uru iche echiche banyere ihe ị na-etinye n'isi gị, ka anyị kwuo ihe dịka Chris na-eyi, okpu okpokoro isi ma ọ bụ ikekwe ọbụlagodi dị ka m.
Ma na aka gị. Ahọrọ m uwe dị mkpa. Ọ bụ naanị ihe dịka 6 Celsius na echere m na nke ahụ bụ ọnọdụ zuru oke maka nke ahụ.
Achọpụtaghị m okpu n’elu ụkwụ m. Ọ bụrụ na mmiri adịghị, m na-eme ya ọfụma ma ọ bụ ka mma.- Otu a ka ọ dị maka m na aka m, m na-ahọrọ n'ezie na ụgwọ ọ bụla iji gbatịa aka m ọbụlagodi na ha dị ntakịrị oyi.
Ugbu a, ọ bara uru iburu n'uche na ndị a bụ ndụmọdụ zuru oke maka ịnya ụgbọ ala na oge oyi nke Europe ma anyị ghọtara nke ọma na ọtụtụ n'ime gị na-alụ ọgụ ihu igwe siri ike karị n'ebe ahụ. - Eeh ma gbaa mbọ hụ na ị zụrụ otu kit maka ihu igwe ị na-anya. - Ọ bụrụ n ’ịchọrọ isiokwu a, nye ya nnukwu mkpịsị aka. - Maka ederede ọzọ pịa ebe ahụ.
Nke ziri ezi, lee gị n'oge na-adịghị anya!
Kedu ka m ga-esi mee ka ụkwụ m na-ekpo ọkụ n’ịgba ịnyịnya n’oge oyi?
Na nke ahụn'imeuche, lee aro asatọmaka idebe ụkwụ gị n’oge oyi aya mere i nwere ike pedalha niileogologo ụbọchị.
Yiri uweihesọks ziri ezi.
Gbalịa mkpịsị ụkwụ ma ọ bụ mkpuchi akpụkpọ ụkwụ.
Zụtaoyi- a kapịrị ọnụịgba ígwèakpụkpọ ụkwụ.
Lezienụ anyanke giisi.
Jide ụkwụ gịkpọrọ nkụ.
(Air Rush) - Nnukwu ihe mere ị ga - eji nwee aka na ụkwụ bụ oyi n'ihi na mgbasa gị adịghị mma, yabụ gbaa mbọ hụ na akpụkpọ ụkwụ gị tọpụ ma ọ bụghị akpachapụ anya iji kwe ka ọbara si na isi gị banye na mkpịsị aka gị. You na-achọgharị mkpịsị ụkwụ gị enyi? - Ana m agbalị kwa.
Mechie oghere ndị dị ka, echere m, ọ bụghị nke ahụ dị mma, mana ị nwekwara ike iwepụ ihe mkpuchi ahụ wee kpuchie windo ahụ naanị ya na ụzọ ndị ọzọ ma ị ga-enwe ezigbo ụkwụ na-ekpo ọkụ. Zuru oke maka oge oyi. Nri, ọ bụrụ na teepu m anọgide. (Mkpuchi agbasiri ike) (egwu rock) - E nwere ọtụtụ ụdị uwe dị iche iche dịka aka dị iche iche, mana ọ dị oke mkpa na ị nwere kit nke ga-arụ ọrụ n'ọnọdụ ị na-ezube ịga.
Ugbu a ebe a na Europe anyị nwere ike n'ozuzu na pụọ ​​na a mara mma oké ụzọ nke oyi uwe. N'ihi na nke ahụ abụghị n'ezie n'ezie n'ezie oyi ebe a, ọkachasị UK. Na mkpokọta, ọnọdụ okpomọkụ anaghị agbanwe nke ahụ na gi ọ bụla.Ma ọ bụrụ na ibi n'ebe ihu igwe dị njọ karị ma ọ bụ ebe okpomọkụ na-agbanwe karịa ụbọchị, ị nwere ike ịtụle ihe ọzọ mpe mpe akwa, ma ọ bụ liner.
Yiri uwe na-adaba adaba n'okpuru mkpuchi oyi nke nwere ike iwepu ma ọ bụrụ na ọnọdụ okpomọkụ agbanwee ma ọ na-ekpo ọkụ n'oge ụbọchị ma ọ bụ ọ bụrụ na aka gị dị mmiri, dochie ya na liner dị iche n'etiti afọ (bass strums) - Unsurprisingly ọ bụ a mmiri na oyi na-atụ ụbọchị ebe a na UK na ọ bụrụ na ị chọrọ na-ata ahụhụ site na mmiri na oyi na-atụ aka mgbe a mbanye anataghị ikike ga-enyere gị aka n'ezie na ọ na-agụnye ụfọdụ latex uwe saddlebag mgbe na-akwadebe gị igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ na-etinye ya na gị azụ n'akpa uwe na mgbe ọ mmiri ozuzo ị nwere mmiri mmiri, tinye ya na nke ahụ pụtara na aka gị nwere ike ịmị mmiri, mana aka gị ga-akọrọ nkụ nwere ezigbo oyi na-atụ aka na ememe ma ọ bụrụ na ịchefu uwe aka gị, ị nwere ike ịbanye mgbe niile gaa ọdụ gas ma ọ bụ ebe a na-ere mmanụ ụgbọ, dozie ha, Bob bụ nwanne nna gị, ebe ahụ ka inwere ya. Ọ dị mma, aka na-ekpo ọkụ ma na-akọrọ aka. (Obi ụtọ na egwu music) - Maka ugo - N'ebe ahụ n'etiti gị, ị nwere ike ịchọpụta na anaghị m etinye sọks ọkụ m taa, kama sọks oyi.
Ndị a nwere ihe ikuku na-egbochi mmiri na mmiri, ha bụkwa nhọrọ mbụ m, agbanyeghị, ọ bụrụ na ịnweghị ike ịnweta sọks oyi ma ọ bụ na ị na-agba ọsọ ma chọọ itinye sọks sọks, na-eme ka okpukpu abụọ dị iche iche bụ iji mee ka ị kpoo ọkụ. Maka na ị kpọchiri ikuku na-ekpo ọkụ n’etiti n’etiti onye ọ bụla. Naanị ihe ị ga-eburu n'uche mgbe ị na-eyi akwa ụkwụ n'ụkwụ gị bụ na ọ bụrụ na ị nwere akpụkpọ ụkwụ siri ike karị, ị nwere ike ịnwe nsogbu ịbanye ụkwụ gị. Ọ bara uru ịnwe akpụkpọ ụkwụ nke abụọ maka oge oyi, nke nwere ike ịbụ naanị ọkara nha buru ibu. (Orchestral Music Na-aga n'ihu) - Usoro GCN ọdịnala iji mee ka ụkwụ gị dị mma ma kpoo ọkụ iji ụfọdụ mpempe akwụkwọ aluminom.
Aluminom aluminium bu ezigbo insulator nke bu ya mere eji ya esi nri. Ugbu a jide n'aka na ị ga-enweta ọmarịcha nnukwu mpempe dị ka nke a, kechie ya na ụkwụ gị na nke ahụ niile kwesịrị idobe ọmarịcha mma na ahụ ọkụ pụọ n'ụkwụ gị tọrọ atọ n'ime akpụkpọ ụkwụ gị. Tinye akpụkpọ ụkwụ gị wee nweta overshoes gị ma ọ bụrụ na i nwere nke ọ bụla ma ị nwere ya! Nicekwụ mara mma, na-ekpo ọkụ ma kpuchie ya.
Zuru okè maka ọnọdụ okpomọkụ ọ bụla belụsọ ma ọ dị oke oyi ịpụ. (chuckles) (eletriki guitar strummers) - Mgbe a na-achọ hacks iji kpoo ọkụ ma kpoo n'oge oyi, ụfọdụ n'ime ndị kachasị dị mfe bụ ndị kachasị dị irè ma bụrụkwa ndị kachasị ọnụ. Enwere ike ịhọrọ ihe nkiri nri.
Enwere ike ịzụta ya dị ọnụ ala na ụlọ ahịa gị, ma ọ dị mfe iji. Just na-agbatị ụkwụ gị niile na ihe dị mma maka ihe nkiri ịrapara bụ na ọ na-arapara n'ahụ ya ka ị ghara iji nke ukwuu. Naanị kpuchie ụkwụ gị na nkwonkwo ụkwụ gị mgbe ị na-eyi akwa mkpuchi wee belata oghere maka mkpịsị ụkwụ gị ma nwee ụkwụ na-eduga n'oké osimiri.
Kpachara anya, ụkwụ gị ga-agba ntakịrị, ma ọ dịghị ihe ọzọ ọ gaghị ajụ oyi. (Rock Rock) - Ọ bụ otu n'ime oge oyi nke oge oyi, ma aka gị anaghị eme aghụghọ ahụ, na-eme ka aka gị dị ọkụ dịka ịchọrọ. Ehe, enwere m ezigbo aghụghọ nke uwe m nwere ike igbochi aka gị ịjụ oyi.
A na-eme nke a iji gwọọ akwara maka mgbu na ihe mgbu, ma ị nwere ike ịzụta ha na ụlọ ahịa ọ bụla ma ọ bụ ụlọikwuu na ha na-abịa n'ụdị dịgasị iche iche ma ha ga-adịgide ruo awa ole na ole ma nwee ike igbochi aka gị ka ọ ghara ịghọ ice. . Ihe ị ga - eme bụ dọka azụ gị, tee ya na aka gị, tinyeghachi ya na aka aka gị, na - ejide n'aka na ihe mkpuchi gị anaghị egbochi ọbara gị. Ya mere, debe ihe niile dị mma, ọbara na-ekpo ọkụ nke na-esi na isi gị ruo n'aka gị mgbe ahụ ị kwesịrị ịnwe mmetụ ọkụ dị mma na aka gị nke ga-eme ka ọ dị mma ma dị ọkụ ruo mgbe ị lọtara n'ụlọ ma nọdụ n'akụkụ ọkụ n'olu dara ụda) Oke.
Oh, nke ahụ dị mma. Chei! (Rock Music) - Ọ bụrụ na oge oyi ndị a niile abụghị oge, mgbe ahụ naanị otu ihe fọdụrụ ime na nke ahụ bụ itinye ego na ngwa ngwa oyi a kapịrị ọnụ maka ọnọdụ kachasị njọ m na-ekwu maka snow, ice , oke mmiri ozuzo na okpuru mmiri efu. Dịka ọmụmaatụ, booties Fizik Artica R5 ndị ​​a, nke m ga-eyi naanị n'ọnọdụ kachasị njọ, mee ka ụkwụ gị kpoo ma kpọnwụọ maka ọtụtụ ụgbọ ịnyịnya kachasị njọ, ihe na-atụgharị uche na ya, akwa mkpuchi na ajị anụ n'ime nke pụtara na ha bụ nke gị Mee ka ụkwụ kporo ọkụ ma kpọọ nkụ n'ọnọdụ ọ bụla.
Naanị nsogbu bụ na ọ nwere ike ị gaghị achọ ịnya n'ọnọdụ ndị a. - Ugbu a, anyị nwere olile anya na ihe ndị a niile enyerela gị aka idobe ụkwụ na aka gị mma na ịnwụ ọkụ na njem ndị ahụ. - Ọ bụrụ na isiokwu a masịrị gị, nye ya nnukwu mkpịsị aka wee mee ka anyị mata ma ọ bụrụ na ị chere na anyị efughị ​​ihe ọ bụla. - Maka ndị ọzọ esi-ederede, pịa ebe ahụ n'ihi na ọ na-enweta mmiri na oyi, anyị ga-agakwa, don ' anyị? - Oh, anyị na-eme - Ugh.
Kedu oyi dị oyi iji igwe kwụ otu ebe?
Maka ụfọdụ ndị na-agba ịnyịnya ígwè, na-agba ịnyịnya aigwe kwụ otu ebena okpomọkụ ọ bụla dị n'okpuru 50 degrees Fahrenheit bụezigbo oyi. Maka kọlụm a, 'ezigbo oyi'akọwapụtara dị ka n'okpuru 32 ogo.
Kedu ihe SPD kwụrụ maka ịgba ịnyịnya ígwè?
SPDma ọ bụ spud ma ọ bụ ShimanoSPD-Nguzon'ihi na Shimano Pedaling Dynamics ma na-ezo aka na Shimano's pedpless pedals ọ bụ ezie na usoroSPDna spud na-ejikarị aka na-ezo aka n'ugwu Shimanoigwe kwụ otu ebemkpagide pedals.SPD-SL na-ezo aka n'okporo ụzọ Shimanoigwe kwụ otu ebemkpagide pedals.
Cycgba ịnyịnya ígwè ọ na-aka sie ike n'oge ihu igwe?
Azịza ha nyere gụnyere njupụta ikuku (ọ ka sie ike ma na -emepụta nguzogide ikuku naoyi na-ajụ oyi), ogige igwe (taya nwere ike ịda nwayọ nwayọ mgbe ha dị.)oyi), na ahụ mmadụ (mọzụlụ anaghị arụ ọrụ nke ọma naoyi).
abs omume na bọl
Ọ dị njọ ịhapụ igwe kwụ otu ebe na oge oyi?
Oyiokpomọkụ, na nke onwe ha, adịghị emebiigwe kwụ otu ebe. Dịka ọmụmaatụ, na-ewetaigwe kwụ otu ebesite naoyin'èzí ikuku na ikuku dị ọkụ n'ime nwere ike ime ka mmiri kpuchie n'ime etiti ahụ, nke nwere ike iduga nchara.03.02.2012
Inggba ịnyịnya ígwè n’oge oyi ọ bụụrụ gị nsogbu?
Gịigba calories na ma gbanyụọigwe kwụ otu ebe.
Mgbe okpomọkụ dara, metabolism gị na-ebili iji debegịna-ekpo ọkụ magịgbaa calorie karia. Otú ọ dị, ọmụmụ na-egosi naoyi- eme ka calorie-burn boost na-asacha mgbe emecharagịkpoo ahụ ma malite ịmega ahụ.Nke 10.10.2019
Kedu akpụkpọ ụkwụ ịgba ịnyịnya kacha mma maka oge oyi?
Akpụkpọ ụkwụ ịgba ịnyịnya oyi kacha mma maka oge ọ na-atụ oyi nke ukwuu, Shimano's RW5 na-egosi na ọ ga-ewere akara ngosi ole na ole site na akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ ME7 nke ika ahụ, dịka iji nke ikpeazụ yiri nke a, ọsọ ọsọ, na mkpuchi ntọala na MTB kicks.
Kedu ka akpụkpọ ụkwụ agba ịnyịnya ihu igwe si eme ka ị kpoo ọkụ?
Enwekwara mkpuchi mkpuchi mpempe akwụkwọ iji mee ka oyi ghara ịbata n'ime akpụkpọ ụkwụ na-enweghị nnukwu nnukwu. N'okpuru mkpọchi mkpọchi mmiri bụ sistemụ ọsọ ọsọ nke edoziri na adọkpụ ma na-ekesa nrụgide ọ bụla n'ụkwụ gị dum.
Enwere akpụkpọ ụkwụ ịgba ịnyịnya ígwè na-enweghị mmiri?
Nanị ya kwekọrọ na akpụkpọ ụkwụ abụọ na atọ, agbanyeghị, ọ bụ otu n'ime ole na ole gụnyere ịgụ ngọngọ maka ha abụọ. Naanị ya na-eme ka nylon sie ike na efere carbon cleat na-enye ntakịrị isi ike n'okpuru pedal. Naanị ya ka a na-egosipụta, agbanyeghị, akpụkpọ ahụ na - enweghị mmiri na - ekpuchi ụkwụ gị kpamkpam.